ရိုဟင်ဂျာများသည်: ကရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသတင်းအချက်အလက် | USAHello
ရိုဟင်ဂျာများသည်: Understanding your Rohingya students and their cultural backgrounds
မတူကွဲပြားသောကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတျောမြားမြားပညာတတ်များသူတို့ကျောင်းသားများကိုအပေါ်အလုံအလောက်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်မခံမယူကြဘူးကြောင်းသတင်းပို့. သငျသညျဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးနေတယ်ဆိုရင်, အသစ်ရောက်ရှိလာသောသတိထားဖြစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်က’ နောက်ခံ. အောက်ပါအချက်အလက်များကရိုဟင်ဂျာကျောင်းသား key ကိုပျေါလှငျခြုံငုံသုံးသပ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူညှိ၌နေသောယဉ်ကျေးမှုတုံ့ပြန်မှုသင်ကြားမှုမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုး’ ထူးခြားတဲ့သင်ယူမှုစတိုင်များ.
အဆိုပါကက်မှာအဆင်သင့်ရပ်တည်နေအိုင်ယာလန်မှပြန်လည်နေရာချထားခဲ့သူတစ်ဦးကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များအား. ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR / ဖီးလ် Behan နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ.
မြန်မာပြည် (မြန်မာ) ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်, 1950 ကတည်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖိနှိပ်မှုနှင့်တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခ. မြန်မာနိုင်ငံကျော်ပါဝင်သည် 100 ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများ. အဆိုပါရိုဟင်ဂျာများသည်ရခိုင်တစ်ဦးထံမှတိုင်းရင်းသားနှင့်ဘာသာရေးလူနည်းစုများမှာ (ထို့အပြင်ရခိုင်ဟုခေါ်တွင်) မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်နယ်. ရိုဟင်ဂျာအတော်များများထောင်ပေါင်းများစွာပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအိုးအိမ်မဲ့နေကြ, သူတို့ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်တဲ့, သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်, အခြေအနေများဆိုးရွားများမှာဘယ်မှာ.
ရခိုင်စီမံကိန်းအရ, ကျော်လွန် 60% ရိုဟင်ဂျာများသည်သားသမီးများ၏ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်ကျောင်းခဲ့ဖူးဘူး, သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အစိုးရကန့်သတ်, နှင့်မရှိခြင်းကျောင်းများ. ဖြည့်စွက်ကာ, ကျော်လွန် 70% အိမ်ထောင်စုများ၏ဦးခေါင်းမပါတရားဝင်ပညာရေးရှိခြင်းသတင်းပို့.
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်သောအနည်းငယ်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဝက်တစ်နေ့အဘို့တက်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်အောက်တွင်-လုံလောက်သောအရင်းအမြစ်ကျောင်းများသို့သွားကြ၏ခဲ့ကြသည်. အများစုမှာကျောင်းသားများအဖတ်စာအုပ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, နှင့်အစိုးရ-ရန်ပုံငွေဆရာများမကြာခဏလစာမခံမယူကြဘူး. ကရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားကျောင်းသူများလည်းမြန်မာပြည်မှာတက္ကသိုလ်တွေတက်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. တချို့ကရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းမီတာစတင်ပါပြီထစ် နှင့် ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း သူတို့၏ကျေးရွာများအတွက်.
ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်သို့မဟုတ်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ်နေထိုင်နေကျောင်းသားများယေဘုယျအားဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရစခန်းများရှိအလယ်တန်းကျောင်းများခွင့်ပြုမထားဘူးကျောင်း-တက်ရောက်ရန်ကိုမဆိုအခွင့်အလမ်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ယနေ့တွင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်လက်ရှိတွင်ဒုက္ခသည်စခန်းရှိရိုဟင်ဂျာများအတွက်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်အလုပ်လုပ်နေကြ. ထိုကျောင်းများသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားတန်းတူကျောင်းအပ်အကြောင်းကိုရှိ.
ရိုဟင်ဂျာများအားမိဘများထပ်တလဲလဲဘာမှထက်ပိုဖော်ပြ, သူတို့သားသမီးတို့အဘို့လိုခငျြတယျအရာတခုပညာရေးဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, အများဆုံးကရိုဟင်ဂျာမိဘများကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖူးဘူး, အမေရိကန်စနစ်များအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိကြ, နှင့်ကလေးများအမေရိကန်မိဘများထက်လျော့နည်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလေ့. ထို့အပြင်, မိန်းကလေးများ၏ပညာရေးအစဉ်အလာတန်ဖိုးမဟုတ်ပါဘူး, နှင့်မိန်းကလေးများပုံမှန်အားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှာကျောင်းထုတ်ယူနေကြတယ်.
အမေရိကန်ရိုဟင်ဂျာမကြာခဏကြောင့်သမိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေသည်အခြားဒုက္ခသည်များအနေဖြင့်အဆက်ပြတ်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကရိုဟင်ဂျာမိသားစုကအခြားအုပ်စုများထက်ပိုပြီးအထီးကျန်နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျစေခြင်းငှါသတိပြုမိလိမ့်ချင်လိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်ကျောင်းကဖြစ်ရပ်များတစ်ခုလုံးကိုမိသားစုဖိတ်ခေါ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့နေဖြင့်နေအိမ်စွန့်ခွာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်နိုင်သည်. မိဘများအနေနဲ့ပညာရေးရတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာရိုဟင်ဂျာများသည်ကလေးများမကြာခဏကြောင့်မိသားစုစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာအလုပျလုပျဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်.
အစဉ်အလာ, အများဆုံးကရိုဟင်ဂျာလယ်သမားခဲ့ကြသည်. ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်ဥပဒေများကြောင့်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်, မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိရိုဟင်ဂျာအများအပြားမြေယာမဲ့ဖြစ်ကြ.
ရိုဟင်ဂျာအများစုဆွန်နီအစ္စလာမ်ဘာသာ၏တင်းကျပ်သောအနက်ကိုလိုကျနာ. အမျိုးသားများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်မုတ်ဆိတ်များ, နှင့်အမျိုးသမီးအများစုနေတဲ့ hijab ဝတ်ဆင်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသား Co-ed စာသင်ခန်းမှထိန်းညှိဖို့အတှကျဒါဟာခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း.
ကျောင်းများတစ်နေ့တာအတွင်းအာကာသနှင့်ကျောင်းသားများဆုတောင်းဖို့အတှကျအခြိနျပေးကာကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလုပ်သင့်တယ်. အစဉ်အလာ, ယောက်ျားအသင်းတော်ဆုတောင်းပဌနာနှင့်အမျိုးသမီးအိမ်မှာဆုတောင်းပဌနာ. ကရိုဟင်ဂျာယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းအထူးသဖြင့်အစားအသောက်နှင့်ဂီတပတ်သတ်ပြီးအတွက်အားကောင်းတဲ့အိန္ဒိယသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်.
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများလူ့အဖွဲ့အစည်းသဘောထားများနှင့်၎င်းတို့၏အထီးကြီးစိုးရပ်ရွာထဲတွင်ဘာသာရေးစံချိန်စံညွှန်းများရှေးရိုးစွဲအနက်ကြောင့်အလေးအနက်ကျား-based ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်များမှာ. တစ်ဦးသား၏မွေးဖွားယေဘုယျအားမျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်. အမျိုးသမီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မိန်းကလေးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွက်ဆက်လက်ရှိနေနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင်ပါဝင်ထံမှစိတ်ပျက်အားလျော့နေကြတယ်. အမျိုးသမီးများနေ့အသိုင်းအဝိုင်းကိစ္စရပ်များအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်. ကွာရှင်းအမျိုးသမီးများနှင့်မုတ်ဆိုးမတို့သည်မကြာခဏအပျေါမှာငုံ့ကြည့်နေကြတယ်. စီစဉ်ပေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုမကြာခဏရိုဟင်ဂျာများအကြားအောင်မြင်စွာလည်ပတ်, ဒါပေမယ့်အတင်းအကျပ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဆန်းမဟုတ်.
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကကရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် ရိုဟင်ဂျာများသည်သင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.